Sunita Dulal - ekantipur - सुनिता दुलाल
Date: Friday, 28 August 2012
शुक्रवार, ८ भाद्र २०६९
Category: सुब्रतसँग अन्तर-कुन्तरका कुरा – Page 11
सबैभन्दा नर्भस भएको क्षण ? – दुई वर्षअघिको तीजमा अमेरिकाको बाल्टिमोरबाट गाडीमा वासिङ्टन डिसीको कार्यक्रममा ट्राफिक जामले गरेर निर्धारित समय भन्दा तीन घन्टा ढिला पुग्दा अत्तालिएर निकै नर्भस भएकी थिएँ ।
सिन्धु सम्मान साँझ
काठमाडौं – जिल्लावासी कलाकारको सम्मान गर्दै हिजो शनिबार सिन्धु सांस्कृतिक साँझ मनाइएको छ ।
राज्धानीमा रहेका सिन्धुपाल्चोकवासीद्वारा गठित सिन्धु मिलन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गायक/गायिका प्रेमध्वज प्रधान, राजु लामा, सुनिता दुलाल, संगीतकार चेतन सापकोटा तथा कलाकारहरु कृष्ण मल्ल, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, जीतु नेपाल, गोपाल नेपाल, देबीराम पराजुली लगायतलाई Continue Reading
मेरै दिलमा फुल्यौ…
काठमाडौ, जेष्ठ १
राम्री पनि के विधि राम्री हौ, भन्या होलान् सबैले हाम्री हौ मेरै दिलमा फुल्यौ नीरमाया, अझै राम्री देखिन्थ्यौ, नजरमा
गाजल लाउनै भुल्यौ नीरमाया…
Published: Kantipur Daily
काठमाडौं कास – सपनाको देश भनिदै आएको अमेरिका एक्चोटि भए पनि टेक्ने रहर नभएका कति होलान् ? कुनै बहानामा त्यहां पुगेपछि फर्किने नि? अगाडि हेर्‍यो तारे भीर त पछाडि फर्कियो अन्ध गल्छीको अवस्थामा रहेको मुलुकमा दोस्रो प्रश्नको उत्तर सामान्यतया अकरणमा पाइन्छ। त्यस्तो अवसर पाउंदा र सहयात्रीहरु उतै Continue Reading
दसैं र कलाकार
Published: आश्विन २७, २०६७
काठमाडौ, दसैंले यो महान् चाड मनाउनेहरूको स्टाटस हेर्दैन । के सिनेकर्मी, के संगीतकर्मी सबै यो बेला त्यस्तै उत्साहमा छन्, जस्तो आममानिस छन् । दसैंमा उल्लासको तौरतरिकाबारे जति सेलिबि्रटीसँग बातचित गरियो, तीमध्ये कोही घरमा खसी नढाले पनि मासु खाने, कोही एकदम रिल्याक्स हुने, Continue Reading